C/llaahi Sanbaloolshe oo loo magacaabay xil muhiim ah |
C/llaahi Sanbaloolshe oo loo magacaabay xil muhiim ah
C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe Taliyihii hore ee Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa loo magacaabay in uu noqdo Safiirka Dowlada Federaalka Soomaaliya u fadhin doona Dalka Turkiga .
Dowlada Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday safiirkii hore ee Dalka Turkiga u fadhiyay Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo xilkaasi qabtay sanadii 2011-kii , waxaana la filayaa in dhawaan xilka Safaarada uu la wareego Mudane Sanbaloolshe.
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya ayaa Dowlada Turkiga u dirtay warqad ay kaga dalbaneyso in ay aqbasho Safiirka Cusub ee Soomaaliya usoo magacawday dalkaasi si loo xoojiyo xariirka labada Dowladooda u dhaxeeya.
Dowlada Turkiga ayaan wali aqbalin codsiga Dowlada Federaalka Soomaaliya ee ku aadan magacaabista Safiirka Cusub, waxaana dhawaan la filayaa in Turkigu aqbalo Safiirnimada Sanbaloolshe una gudbiyo Warqadihiisa aqoonsiga Madaxweynaha DalkaTurkiga.
Safiirkii hore ee Dowlada Soomaaliya u fadhiyay Dalka Turkiga Maxamed Mursal Sheekh ayaa xaflad sagootin ah waxaa loogu sameeyay Magaalada Ankara ee Dalka Turkiga, waxa ayna arintan muujineysa in dhawaan xilkaasi la wareegi Doono Mudane Sanbaloolshe oo loo magacaaay Safiirka Soomaaliya u fadhin doona Dalka Turkiga.